Ukuhla kweTV kunye noMzekelo wendlela iWebhu inokunceda ngayo
NgoMgqibelo, Julayi 15, 2006 NgoLwesibini, Julayi 4, 2017 Douglas Karr
Kule nyanga sibonile isezantsi esitsha somboniso womabonwakude wenethiwekhi. Bendihlala ndigxeka amajelo eendaba, ndichithe iminyaka yam yokuqala yentengiso kwishishini lephephandaba. Kukho iimpawu zotshintsho kwenye indawo, nangona. Umjelo weSci Fi, umzekelo, kutshanje uthumele i-Intanethi Pilot yekhathuni entsha, iAmazing Screw-On Head. Badibanisa umqhubi opheleleyo kunye noPhando malunga nomboniso. (Ukuba ufumana ithuba,